Thursday October 08, 2020 - 19:15:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
19 sanadood oo xiriir ah ayaa kasoo wareegtay markii ay dowladda Mareykanka duullaan saliibi ah ku qaadday wadanka Afghanistan, 7-dii bishii October 2001 ayay aheyd markii ciidamada Mareykanka ay caga dhigteen ciidda Afghanistan iyagoo doonayay in a
19 sanadood oo xiriir ah ayaa kasoo wareegtay markii ay dowladda Mareykanka duullaan saliibi ah ku qaadday wadanka Afghanistan, 7-dii bishii October 2001 ayay aheyd markii ciidamada Mareykanka ay caga dhigteen ciidda Afghanistan iyagoo doonayay in ay damiyaan nuurka Alle.
Hadda oo duullaankaas laga joogo waqti ku dhow 20 sano mujaahidiinta ayaa guul ku dakaynaya halka dowladihii shisheeye ay isaga kala dhuumanayaan saaxada Jaxiimada dagaalka Afghanistan.
Geesiyaasha towxiidka Taliban ayaa ubabac dhigay mid kamida Juyuushtii ugu xooganeed caalamka uguna halista badnaa, cadowga ayaa adeegsaday hub mamnuuc ka ah in bani'aadamka loo adeegsado.
Mareykanka oo wata ciidan gaaraya 300 oo kun oo askari ayaa duullaankaas qaaday balse hadda oo la joogo 2020 ayuu Mareykanka ku qasbanaaday in uu mujaahidiinta ka dalbado heshiis xabad joojin ah fursadna loosiiyo in ciidamadiisa uu labaxo.
Hadaba afghanistan waa dal nuucee ah qaabkeese ku bilaawday dagaalka wadankaas? waxaad uga bogan kartaan warbixintan ay diyaarisay Idaacada Andalus.